Azontsika atao ny manavaka ny Apple Watch amin'ny alàlan'ny firaketana ny anarantsika | Vaovao IPhone
Nandritra ny taona vitsivitsy dia navelan'i Apple maimaimpoana ny fampifangaroana ny fitaovana iPhone, iPad ary iPod Touch an'ny orinasa, amidy amin'ny fivarotana an-tserasera, miaraka amin'ny lahatsoratra tadiavinay, zavatra izay tadiavinay manokana Heveriko fa mampihena ny sandan'ny fitaovana io rehefa manary azy io hahazoana vaovao, indrindra raha mailaka an'ny tompona ny soratra voarakitra an-tsoratra (hitako ny maro toa an'io).
Toa izany, araka ny efa navoakan'ny tranonkala frantsay iPhonote, izany Apple dia afaka namela ny mpampiasa hanavaka ny Apple Watch amin'ny sokitra, toy ny amin'ny iPhone, iPod ary iPad, ny fitaovanao miaraka amina lahatsoratra voarakitra fa tsy mandefa teny roa maromaro raha be indrindra, satria misy toerana malalaka, izay voalaza fa habaka dia misy kely. Ity sary sokitra laser ity, toy ireo fitaovana hafa, dia ho afaka ihany koa.
Ny tena tsy mazava dia ny fahafaha-mampiavaka ny fitaovantsika amin'ny sokitra, Azo alaina amin'ny andro voalohany amidy ny Apple Watch ity na raha mpampiasa izay maniry izany dia tsy maintsy miandry herinandro na volana vitsivitsy izy ireo. Toy ny tsaho maro, ity fampahalalana ity dia natolotra, araka ny iPhonote, avy amin'ny loharanom-baovao tsy fantatra anarana izay tafiditra ao amin'ny tetikasa Apple Watch.
Araka ny voalazan'ity lahatsoratra ity, ireo mpividy te hanoratra ny fitaovany, Amin'ny fivarotana an-tserasera ihany no tokony hataon'izy ireo, satria ny magazay ara-batana dia tsy manana milina ilaina hanaovana personalization amin'ny laser, toy ny mitranga raha te hampiavaka ny iPad na ny iPhone isika.
Ny safidy hanamboarana ny Apple Watch miaraka amina sokitra, miaraka amin'ny fehikibo samihafa, samy fanatanjahan-tena, vy sy hoditra, miaraka amin'ireo tranga volamena, aliminioma ary vy, rehefa mividy ity fitaovana ity, mila mieritreritra an'izany betsaka isika, raha tsy miakatra amin'ny tampon-trano ny vidin'ity fitaovana ity, izay tsy maintsy hipetrahantsika amin'izay notahirizinay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Azontsika atao ny manavaka ny Apple Watch amin'ny alàlan'ny firaketana ny anarantsika
Tianao ve ny sary mivoaka ara-tsindrimandry an'ny Apple Watch? Ireto misy vitsivitsy
WhatsAppCallEnabler: ampandehano ny antso WhatsApp amin'ny iPhone-nao